emelitere ikpeazụ: Jul. 16 2019 | 3 min agụ
Ị na bupụrụ eruda ma dị njikere na-amalite na-achọ a ịrịba ama ndị ọzọ online. Ọ bụ na-akpali akpali, ma na-emenye ụjọ na ahụmahụ. All nke a na mberede na ị na-enwe ohere na-ahụ na-emekọ ihe kpọrọ, karịa na ị na-ezukọ a afọ! Ma echere online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị abụghị ihe ọ bụla dị ka ahụ ndị na onye na n'ezie ọ dịghị abịa na a na-achị akwụkwọ ...
Ghọta Vocab: Otu n'ime ihe mbụ na nke kasị dị mgbagwoju anya nzọụkwụ na-emeso ndị lingo. Ndị a bụ ndị gị na mbụ oge nke na mmekọrịta, ụdị echiche ị chọrọ ịhapụ na otú n'ụwa ị na-ahọrọ ihe na-eme?
Dị nnọọ ka na "bụ ndụ n'ezie" okwu ndị anyị na-eji kọwaa a ụdị mmekọrịta, dị ka a okwukwe aka, ibinye onwe ha na-akọwa ihe dị nnọọ mere n'etiti mmadụ abụọ. Echiche a ka na-emetụta gị online nhọrọ:
Dị ka - Cheedị echiche banyere nke a ka a ọnụ ọchị gafee si mmanya. Ọ nwere ike jidere onye anya. Otú ọ dị, ọ bụghị dị ka na-ekere òkè dị ka ma ọ bụrụ na ị gara n'elu na kwuru, "Nnọọ."
Iku -Ihe Wink bụ nnọọ dị ka ngwa ngwa zitere dị ka ọ na-asuan.
Favorite - Nke a bụ na gị na onye na-ekwu ka na akara na Starbucks. Ị chere na a icheku ọkụ ozugbo; ee, ị dị nnọọ zutere ha na-agafe, ma i nwere ike na-eche na mabanye ha ọzọ.
Izi ozi - Nke a bụ a ozi ederede site "" onye ị na-na na a na-eche na-anụ si ụbọchị nile. Ha na-na-kpam kpam n'ime ị.
Ime a nhọrọ na-esi na-ekwurịta okwu pụrụ ikpebi ụdị mmeghachi omume ị ga-esi.
Ujo na itu n'anya: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ ihe ole na ole profaịlụ tupu ede gị, na nke ahụ bụ dịkwa mma.
– Ọ bụ ike ịmata ihe na-agụnye na a na profaịlụ ma otú ọ bụrụ na ị na-na na ọhụrụ na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ị na-achọghị dee a haiku, ma unu adịghị chọrọ mụụrụ ndị mmadụ anya mmiri na nkọwa gị 5th ọkwa piano recital.
– Jide n'aka na-enye onwe nkọwa, e nwere otu puku ndị mmadụ na-n'anya fim na 'na-achọ ịhụ onye na mpụ,'Ihe n'ezie dị iche iche banyere gị? (Ndi na ị gaa achịcha dị iche iche na ụlọ akwụkwọ na ugbu a na-arụ ọrụ na ahịa. Ikekwe, ị na-adịbeghị anya ekemende paraseelin?)
– Kọwaa ihe ị na-achọ na onye, ma ọ bụrụ na ị na-eme ndị mmadụ nwere ike iche na profaịlụ gị bụ adịgboroja.
Nwee Obi Ike: Ị sonyeere online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị agaghị na-a aja, na ị chọrọ ịhụ onye!
– Ị nwere ihe ọ bụla na-atụfu! Gịnị bụ Ohere na ị ga-agba ọsọ n'ime onye a? Ọdachi na-ọ dịghị onye; adịghị iku na ha, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ozi.
– Ekwela ka gị n'ime obi abụọ merie. Ị maghị onye nwere ike inwe mmasị ị, gwụla ma ị na-enye ya a na-agbalị. Ị ghara iso online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-anọdụ ala na akuku na ikpa efe mere ị? Ọ bụrụ na ị mere, M na-eche na ị bụ na ihe ọjọọ website.
Gbalịa ihe ọhụrụ: Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-ama "gị ụdị,"Ma na-agbalị na-ekwu okwu onye na-bụ dị iche iche si gị n'oge gara aga mmekọrịta.
Mgbe i nwere ọtụtụ puku nhọrọ na-achọ na ị gị icheku na kọmputa, ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-anwale mmiri ịmụta ihe ị chọrọ. Ikekwe, ị na-a ụbọchị na a ome ochi na-aghọta, "M nnọọ ike ịbụ na onye honks ha imi maka a ndụ." Ọ dịghị ihe ọjọọ dị na ya, ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-amụta na nke ahụ bụ ihe ị na-na na a na-eche ihe niile tinyere. Gị mgbe ihe nwere ike ime.
Bụrụ Onwe Gị: Dị ka Dr. Seuss etinye ya, "Abụ m onye m bụ na nke ahụ bụ oké ihe na-adị." Ọ bụrụ na Dr. Seuss kwuru na ọ, ọ na-wee na-ezi. Ọ bụ ike na-amalite a mmekọrịta onye ọ bụrụ na ị na-agbalị ka hà na-abụ onye ọzọ.
Ee "hottie8675309" bụ nnọọ mara mma, ma i nwere ike ịhụ ihe ọ bụla na ha profaịlụ gị nwekọrọ. Ị na-eche ka onwe gị, "Ọfọn ha aha ya bụ 'The mkpụrụ vaịn nke Ọnụma ' dị ka ha mmasị akwụkwọ. Echere m na m na-agụ na na ụlọ akwụkwọ dị elu. "Tupu ị mara ihe na ya, ị na na na na a ụbọchị onye na-dere ha PhD dissertation on 'The mkpụrụ vaịn nke Ọnụma. ' Jisie na na!